एनआरएन यूके उपाध्यक्ष उम्मेदवार पौडेलका तीन बुंदे एजेण्डा (भिडियो)
बिहीबार, १९ भदौ, २०७६
लण्डन । बेलायतका एक स्थापित व्यवसायी एवम् समाजसेवी कमल पौडेल आसन्न एनआरएन यूके निर्वाचनमा उपाध्यक्ष पदमा उम्मेदवार छन् ।
एनआरएन यूकेको संस्थापनकालदेखि नै सदस्यका रुपमा आबद्ध हुंदै दुई कार्यकाल सल्लाहकारको भुमिका समेत निभाइसकेका उनले यसपटक भने कार्यसमितिमै रहेर काम गर्ने जमर्को गरेका छन् ।
उपाध्यक्ष पदका उम्मेदवार पौडेलले आफ्नो उम्मेदवारीसंगै आफ्ना तीन बुंदे एजेण्डा पनि सार्वजनिक गरेका छन् । गैरआवासीय नेपालीहरुको विभिन्न हकअधिकार स्थापित गर्न पहल गर्ने, संस्थालाई नारामा मात्र नभएर व्यवहारमै सबैको साझा बनाउने र सदस्यता वितरण एवम् निर्वाचन प्रणालीलाई अनलाइन बनाएर व्यवस्थित गर्ने उनका मुख्य एजेण्डाहरु छन् ।
गैरआवासीय नेपालीहरुको नागरिकता, सम्पत्ति, लगानीदेखि भूपू गोर्खा, इमिग्रेसन लगायतका विषयसंग सम्बन्धित विभिन्न हकअधिकार स्थापित गर्दै समस्याहरु समाधानको लागि लबिंग तथा समन्वयकारी भुमिका खेल्ने पौडेलको प्रतिबद्धता छ ।
एनआरएनमा सबैको अपनत्व रहने गरी साझा संस्था बनाउन आवश्यक वातावरण निर्माणका लागि पहल गर्ने योजना उनले बनाएका छन् । संस्थाको सदस्यता वितरण एवम् निर्वाचनको प्रक्रियालाई अनलाइन प्रणालीमा लगेर व्यवस्थित पार्ने सोंच उनीसंग छ ।
'निर्वाचनको मुखमा मतदाताहरुमाझ ठूला ठूला आश्वासन देखाउने, प्रतिबद्धता गर्ने तर पछि पूरा गर्न सकिएन भने के गर्ने ?' पौडेल भन्छन्, 'त्यसैले मैले साना तर पूरा गर्न सकिने खालका एजेण्डाहरु अघि सारेको छु । जसलाई पूरा गर्न सक्ने ममा पुर्ण आत्मविश्वास छ ।'
निर्वाचन अभियानको क्रममा प्रचारप्रसारका लागि अहिले बेलायतका विभिन्न क्षेत्रस्थित समुदाय, संघसंस्था र आम नेपालीहरुमाझ पुगिरहेका पौडेलले आफ्ना एजेण्डाहरु सुनाउँद मत मागिरहेका छन् ।
बेलायतका एक सफल नेपाली व्यवसायी पौडेल आईएमई लण्डनका निर्देशक हुन् । ग्लोबल फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट र आईमई ग्लोबल होल्डिंग जस्ता कम्पनीमा समेत निर्देशक रहेका उनी बेलायतस्थित रेमिटेन्स व्यवसायीहरुको संगठन एशोसिएसन अफ यूके पेमेन्ट इन्सटिच्युसनमा कार्यसमिति सदस्यको भुमिका पनि छन् । नेपालमा बैंक, फाइनान्स, इन्सुरेन्स, हाईड्रो लगायतमा उनको लगानी छ ।
सामाजिक कार्यहरुमा समेत क्रियाशिल पौडेल नेप्लिज ब्रिटिश कम्युनिटी यूकेको संस्थापक संयोजक हुन् । क्याट यूकेमा महासचिव, उपाध्यक्ष लगायतका जिम्मेवारीमा रहेर काम गरिसकेको अनुभव उनीसंग छ । बाग्लुंगमा जन्मिएका पौडेलको नेपालमा अहिले बसोबास चितवनमा छ । विगत १९ वर्षदेखि बेलायतमा रहेका उनी लण्डनको ह्यारोमा परिवारसहित बस्दै आएका छन् ।
हेरौं भिडियो अन्तर्वार्ता :
गुठी समेत समावेश गरी एकीकृत भूमि ऐन ल्याउने तयारीमा सरकार
काठमाडौँ । सरकारले भूमि व्यवस्थापनलाई समयानुकूल परिमार्जित गर्ने गरी एकीकृत भूमि ऐन ल्याउने भएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयले भूमिको सही व्यवस्थापन गर्न बनाइएका करीब पाँच दर्
स्मरण शक्तिलाई यसरी राख्नुहोस् चुस्त
एजेन्सी । स्मरण शक्ति चुस्त राख्नको लागि बदामलाई धेरै उपयोगी मानिन्छ । बदाममा पाइने पोषक तत्वहरु जस्तै प्रोटिन, म्याग्निज, कपर र राइब्लोफ्लेविन आदि अल्जाइमर र अन्य मस्तिष्क सम्बन्धि रोगलाई हटाउन मद्धत
आतङ्ककारी हमलामा ७१ सैनिककाे मृत्यु, आइएसले लियाे आक्रमणको जिम्मेवारी
नियामी (एजेन्सी) । नाइजरको पश्चिम भागमा रहेको अर्थात मालीको सिमानानजिकै अवस्थित एक सैन्य शिविरमा भएको आतङ्ककारी हमलामा परी कम्तीमा ७१ सैनिक मारिएका छन् ।
एजेन्सी । स्मरण शक्ति चुस्त राख्नको लागि बदामलाई धेरै उपयोगी मानिन्छ । बदाममा पाइने पोषक तत्वहरु जस्तै प्रोटिन, म्याग्निज, कपर र राइब्लोफ्लेविन आदि अल्जाइमर र अन्य मस्तिष्क सम्बन्धि रोगलाई हटाउन मद्धत गर्छ ।
वीकेण्ड मनाउँदा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू
कपाल झर्नबाट बच्न...
एजेन्सी । विश्वमा अनेकौ रहस्यहरु रहेका छन् । त्यसैले विश्वका कैयौं व्यक्तित्वहरु अनेकौ रहस्यहरुको खोज–अनुसन्धानमा दत्तचित्त भएर लाग्दछन् । तर विश्वमा यस्ता कैयौं रहस्यहरु रहेका छन् जसलाई पत्ता लगाउन असम्भव जस्तै रहन्छ ।
पोखराका रोहित गिरी जसले सजिलै समात्छन् जस्तोसुकै विषालु सर्प
चियाको मूल्य ८० हजार !
एप्पल कम्पनीबारे यी कुराहरु जुन धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ